बेक्कार शंका गर्छन पति ,बिदेशमा बसेर।
बुझ्दैनन !सम्झाउछु कत्ति ,बिदेशमा बसेर।
जे छ खाउला सँगसगै रमाउला भन्दा नि
उतै खर्च गर्छन भए जती ,बिदेशमा बसेर।
मेरो चरित्रमाथी शंका र उपशंका गरी गरी
सम्झिन्छन जवान श्रीमती ,बिदेशमा बसेर।
छोरा छोरिले बाबा खोजेर हैरान पारी सके
आउनु बदलिन्न हाम्रो गती बिदेशमा बसेर।
अर्काको देशमा मरिहाले भेट हुन्न यता फेरि
सुखकोआश छैन एक रति बिदेशमा बसेर ।।
This entry was posted in गजल and tagged Lamichhane, Maiya, Pallawa, पल्लव, मैया लामिछाने. Bookmark the permalink.
← मीक्षाः मेरो नजरमा “नसुतेको रात” गजलसङ्ग्रह